YAAB: Wixii Uu Virgil Van Dijk Ugu Jawaabay Jordan Pickford Oo Isku Dayay Inuu Caawiyo Kaddib Markii Uu Dhaawacay Oo Lasoo Bandhigay - Gool24.Net
YAAB: Wixii Uu Virgil Van Dijk Ugu Jawaabay Jordan Pickford Oo Isku Dayay Inuu Caawiyo Kaddib Markii Uu Dhaawacay Oo Lasoo Bandhigay
Waxa shaaca laga qaaday jawaabtii uu daafaca dhexe ee kooxda Liverpool ee Virgil Van Dijk siiyay goolhayaha kooxda Everton ee Jordan Pickford oo dhaawac halis ah gaadhsiiyay bilawgii kulankii ay shalay labada kooxood bar-bardhaca galeen.
Sida ay sheegayaan warar haatan soo baxayaa, Virgil ayaa diiday inuu caawimo ka helo goolhayaha dhaawaca gaadhsiiyay oo isku dayay inuu garab siiyo intii kulanku socday ee dhaawaciisa lagu mashquulsanaa.
Van Dijk ayaa la filayaa inuu tijaabo dhinaca jilibka ah mari doono maanta oo Axad ah si loo ogaado heerka uu gaadhiisan yahay dhaawaca jilibkiisu iyo haddiiba uu seegi doono inta xilli ciyaareedka ka hadhay oo dhan.
Van Dijk ayaa kaddib markii uu daawayn ku dhex helay garoonka shalay intaas kaddib ayuu isaga oo biro ku boodaya tagay dhinaca cisbitaal baadhitaano loogu sameeyay.
Sida uu hadda sheegayo wargeyska Liverpool Echo ee Liverpool kasoo baxaa, Pickford ayaa isku dayay inuu ka caawiyo VVD inuu istaago balse la kulmay diidmo qayaxan oo cad.
Van Dijk ayaa ugu jawaabay “Maya” kahor intii uusan Sadio Mane soo kala dhex galin una sheegin shabaq ilaaliyaha Toffees inuu iska tago oo aan loo baahnayn caawimadiisa.
Warar hordhac ah oo laga helay beIN Sports ayaa sheegay in 29 sano jirka ree Netherlands uu maqnaan karo toddoba ilaa siddeed bilood taas oo dhabar jab weyn ku noqonaysa difaacashada horyaalka ee Liverpool.
Van Dijk ayuusan wax dhaawac ah oo uu kulamo ku seegay gaadhin tan iyo markii uu January 2018 kaga soo biiray Reds dhinaca Southampton.